Top 3 iTunes ndabere Extractors / -Ekiri
Ọ bụla n'ime anyị nwere otutu nke bara uru na nke dị mkpa data na faịlụ na anyị igwe. Chegodị otú ike ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ị na-apụghị wepụ gị ndabere faịlụ ozugbo ị na ngwaọrụ na-emebi ma ọ bụ na-efu. Ọfọn, na ekedi idaha a afọ ole na ole gara aga maka iOS ọrụ. Ma ekele ugbu a, ị nwere ọtụtụ ọzọ softwares (extractors / ekiri) nke-enyere gị aka wepụ na naghachi gị ndabere faịlụ bụrụ na nke ọ bụla na ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke faịlụ na kwa na-ele gị ndabere faịlụ. N'elu atọ iTunes ndabere extractors / ekiri bụ:
Ọ dịghị 1: Wondershare Dr.Fone maka iOS
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ otu nke kasị mma ngwa n'ihi na-agbake gị faịlụ, ozi, kọntaktị, ihe oyiyi, videos wdg si gị iPhones, iPads na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ. Ọ na-akwado niile nsụgharị nke iOS software na-enyere gị aka naghachi faịlụ ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-efu ma ọ bụ dum OS nke ngwaọrụ gị Nwela emerụ ruru ụfọdụ oru mbipụta.
Ọ dị mfe iji na hassle free usoro na-ejedebeghị nzọụkwụ.
Na ọ bụ dị ma na Mac na Windows n'elu ikpo okwu.
Ọ nwere ọrụ enyi na enyi interface nke na-eme ọ dị nnọọ mfe ka onye ọrụ ọbụna maka mbido.
Ọ nwekwara ike-eji idozi usoro OS nke ngwaọrụ gị.
Links: Download Windows ikpe mbipute Download Mac ikpe mbipute
Ọ dịghị 2: ekwentị Nnapụta
Ekwentị Nnapụta bụ otu nke kasị mma ndabere extractors dị taa maka iOS ọrụ. E Nwere ma na Windows na Mac, ọ na-enye gị a mgbanwe wepụ ihe karịrị 20 dị iche iche nke faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ. Ya-enye gị naghachi data dị ka oku na ndekọ, ozi, photos, videos, igwefoto mpịakọta, ngwa data wdg
Ọ na-ekwe ka ị na-wepụ backups si dị iche iche iCloud ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-ezoro ezo.
Otutu formats na-akwado ịzọpụta exported iOS ndabere faịlụ.
Na ọ bụ dị na ma Windows na Mac na-enye gị ohere mbupụ data kpọmkwem site na ngwaọrụ gị.
Ya-enye gị iji weghachite data na 3 dị iche iche enem ụzọ.
Links: Download ya ebe a
Ọ dịghị 3: iPhone ndabere extractor
Ọ bụ nnọọ ezi software iji nweta nkwado ndabere na mpaghara ọmụma ma wepụ furu efu data maka ihe niile iOS ngwaọrụ. Ọ na-nwere sọrọ n'elu ikpo okwu na Windows na Mac. Ọ nwere ihe ezoro ezo ndabere nkwado nke na-achọ paswọọdụ n'ihi na mma nche.
Ọ nwere sọrọ n'elu ikpo okwu ma na Windows na Mac.
Ọ nwere pụrụ iche ezoro ezo paswọọdụ echebe mode n'ihi na mma nche.
Ọ na-ekwe wepụ data ma site na iOS ngwaọrụ backups na iCloud backups.
Ọ nwere ọrụ enyi na enyi interface.
Aro maka 3 iTunes ndabere Extractors
Akwado OS Ọma ọnụego Benifits Ala nke iji
Nnọọ ewu ewu
Nkezi fim 4.5 / 5
E wezụga data mgbake, ọ na-enyekwara idozi gị iOS usoro nsogbu dị ka na-acha ọcha Apple, nwa ihuenyo, mgbake mode, wdg Dị mfe iji na ọrụ enyi na enyi.
Na-eto eto Popular
Nkezi fim 4/5 Na-enye ohere iji naghachi Skype akụkọ ihe mere eme si iTunes ndabere Mfe iji na otutu mgbake nhọrọ.
iPhone ndabere extractor
Nkezi fim 3.5 / 5
Wepụ ọzọ data si iTunes ndabere Dị mfe iji.
Anya n'ihi na a na-ewu ewu ndabere extractor na ike na-eme ọtụtụ nke ọrụ ozugbo. Wondershare Na-eduga ná ụzọ n'ihi na ọ nwere ike igosi a usu nke omume na mgbe i nwere ike ned-akwụ iji adịchaghị atụmatụ, ị na-na-a otutu ihe na efere karịa ị ga-ejikarị eme na ihe ọ bụla ndabere extractor. Ugbu a, na-azọpụta gị data ka nwetara a dum ọtụtụ dị mfe.
Olee otú iji weghachi si iTunes ndabere
Chọta Best Ụzọ ndabere gị iTunes Library
Ụzọ dị mfe iji Nyefee Music si iPod kpochapụwo ka iTunes
Otú nyefee Songs si iTunes ka iPad
> Resource> iTunes> Top 3 iTunes ndabere Extractors / -Ekiri